Jonga iWest Cork, i-cottage epholileyo kufutshane neBallydehob
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRobert & Steffie
Ngaba ukulungele ukuthandana neWest Cork? Indlu yethu enesitayile esikhethekileyo ngaphandle nje kweBallydehob yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa!
Indlu yethu ikwi-approx. Iihektare ezi-2 zomhlaba apho uya kufumana indlu yethu yasefama.
Ngelixa uyonwabele i-cottage yethu, ungonwabela ezilalini zaseIreland, hamba uhambo lokuhamba, uhambo lwemini, ndwendwela iBantry okanye iSkibbereen, iBeara Peninsula nokunye okuninzi!
I-cottage yethu ilungiselelwe iindwendwe ezi-2, kodwa kukho ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala, ngoko inokwamkela iindwendwe ezi-3 ukuba uyathanda.
Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-ceramic cooker, i-oveni, umatshini wekofu, i-toaster kunye nefriji.
Ngaphakathi kwegumbi lokuhlala elihlotshiswe ngokucokisekileyo, uya kufumana isitofu somthi wepellet, ongaphezu kokwaneleyo ukutshisa yonke i-cottage. Iiplanga zokhuni ziya kubakho xa ungena kwaye ziya kunikezelwa xa zifuneka.
Nceda uqaphele ukuba ngoku sine-intanethi ngesathelayithi. Sinoqhagamshelo lwesathelayithi nge-Starlink, kuyakhawuleza ngokufanelekileyo kwaye kukho ukulibaziseka okuncinci ekufumaneni idatha kwisathelayithi, kodwa yithathele ingqalelo oku xa unqwenela ukusebenzisa isithuba ukwenza umsebenzi kwi-intanethi. Sibuze iinkcukacha ezithe vetshe ukuba uyazifuna.
Kwigumbi lokuhlala uya kufumana iTV, edityaniswe nesathelayithi kwaye inika uninzi lwamajelo ase-UK. Kukwakho nokhetho lokudlala iiDVD, apho sinokukhetha okulungileyo onokuthi ukhethe kuzo.
Umbuki zindwendwe ngu- Robert & Steffie
Sihlala ebumelwaneni so akhonto ikude. Ungakhalisa intsimbi yasecangweni okanye usithumelele umyalezo kwaye siya kuzama ukunceda kwakamsinyane.